FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISilozi ISpanish Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiBhulu IsiBislama IsiBulgarian IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiChitumbuka IsiCibemba IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFiji IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKikaonde IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiLatvia IsiLingala IsiLithuania IsiLuvale IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMyanmar IsiNgesi IsiNorway IsiPhuthukezi IsiPolish IsiQuechua (saseCuzco) IsiRashiya IsiRomania IsiSamoa IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwahili (saseCongo) IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiThai IsiTigrinya IsiTok Pisin IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiUkrainian IsiVietnam IsiWaray-Waray IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu isi-Igbo
Iicawa zineembono ezingafaniyo ngomphefumlo nento eyenzeka kuwo xa sisifa. Noko ke, iBhayibhile iyakucacisa oku.
Abantu abaninzi bakholelwa ukuba umphefumlo awufi. Abanye bakholelwa ukuba umphefumlo usoloko uzalwa ngokutsha, uze uvele komnye umzimba kusakufa owokuqala. Abanye bathi umphefumlo ekugqibeleni udlulela kwenye indawo, mhlawumbi ezulwini okanye engcwabeni.
IBhayibhile ayithi umphefumlo awufi. Umprofeti uHezekile owasetyenziswa nguThixo ekubhaleni iBhayibhile, wathi umphefumlo unokohlwaywa ngokufa. IBhayibhile ikwasebenzisa ibinzana elithi ‘umphefumlo ofileyo’ xa ithetha ngesidumbu. (Levitikus 21:11) Kucacile ke ukuba iBhayibhile ayifundisi ukuba umphefumlo awufi.
“Umphefumlo owonayo—kuya kufa wona.”—Hezekile 18:20.
Ngaba umphefumlo wahlukile emzimbeni?
Umphefumlo uba semzimbeni ngoxa umntu esaphila uze uphume xa esifa.
Kuthethwa ngomama ozala “imiphefumlo”—oko kukuthi, abantu abaphilayo nabaphefumlayo. (Genesis 46:18) Igama lesiHebhere elithetha “umphefumlo” elisetyenziswe eBhayibhileni linokuguqulelwa ngokuthi “isidalwa esiphefumlayo.” Ngamanye amaxesha eli gama lisetyenziswa naxa kuthethwa ngezilwanyana. Ngaphezu koko, iBhayibhile ithi umphefumlo uyakudinga ukutya. (Duteronomi 12:20) Ukuba umphefumlo ubuyinto eyahlukileyo emzimbeni, ngaba ubuza kudinga ukutya okanye kufuneke uphefumle? EBhayibhileni, igama elithi “umphefumlo” libhekisela kumntu ophilayo, kuquka umzimba, iimvakalelo nobuntu baloo mntu.
‘Wazala imiphefumlo elishumi elinesithandathu.’—Genesis 46:18.
Kwenzekani emphefumlweni xa sisifa?
Njengoko imizimba yethu itshabalala xa sisifa, “akukho msebenzi nakuyila nakwazi nakulumka engcwabeni.” (INtshumayeli 9:10) IZibhalo zisiqinisekisa ukuba xa umntu esifa, ‘ubuyela emhlabeni; ngaloo mini ziyatshabalala iingcamango zakhe.’ (INdumiso 146:4) Umphefumlo ofileyo awukwazi kuzenzela nto, ibe kungenxa yoko le nto iZibhalo zisithi abafileyo “balele.”—Mateyu 9:24.
KUTHENI KUNJALO NJE?
Xa ufelwe ngumntu omthandayo, uye ube nale mibuzo engqondweni: Baphi abafileyo? Injani imeko yabo? Ngaba bava ubuhlungu? Ekubeni iBhayibhile isiqinisekisa ukuba abafi abeva nto, sinokuthuthuzeleka kukwazi ukuba abeva buhlungu. Kunokusithuthuzela ngakumbi ukwazi ukuba uYehova uthembisa ukuba uza kubavusa abafileyo kwixesha elizayo.—Isaya 26:19.
“Abafileyo, abazi nto konke konke.”—INtshumayeli 9:5.
Abantu abaninzi bakholelwa ukuba uThixo wohlwaya abantu ngonaphakade. Ngaba uThixo ukhohlakele? Kwenzeka ntoni xa sisifa?
Ithini IBhayibhile Ngomphefumlo?